‘खोपले कोरोनाको अन्त्य गर्दैन’ : मास्कको प्रयोग महत्वपूर्ण
मंसिर २०, २०७७ ०८:११ मा प्रकाशित
जेनेभा । फाइजरले विकास गरेको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त भइसकेका बेला खोपले मात्र कोभिड–१९ अन्त्य नगर्ने विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी प्रमुख डा. माइकल रायनले शुक्रबार खोप मात्रले कोभिड अन्त्य नहुने बताउनुभएको हो ।
‘खोपले कोभिडलाई शून्य गराउँदैन’, डा. रायनले भन्नुभयो, ‘कोभिडलाई कम गर्ने हामीसँग उपलब्ध साधनमा खोप र यसको प्रयोग एकदमै प्रमुख साधनका रूपमा थपिन आउँछ।’ खोप मात्रले कोभिडलाई अन्त्य नगर्ने भएकाले अन्य उपायहरू उत्तिकै अवलम्बन गर्नुपर्ने डा. रायनले बताउनुभएको छ ।
मास्कको प्रयोग महत्वपूर्ण
शुक्रबार अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले एक निर्देशन जारी गर्दै मास्क प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । अमेरिकामा संक्रमण अझ तीव्र भएको भन्दै परिस्थितिअनुसार घरमै बस्दा पनि मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको हो ।
‘घरबाटै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिने संख्या तीव्र देखिएको छ’, केन्द्रले भनेको छ, ‘संक्रमणबाट बच्न घरमा रहँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा अन्य रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
अमेरिकामा बिहीबार नयाँ रकेर्ड कायम गर्दै २ लाख १७ हजार ६६४ नयाँ संक्रमित भेटिएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै २ हजार ८७९ को ज्यान गएको थियो । शुक्रबार पनि अमेरिकामा अर्को रेकर्ड कायम गर्दै १ लाख १ हजार २७६ संक्रमित अस्पताल भर्ना भएको बताइएको छ । एकैदिन लाखभन्दा बढी अस्पताल भर्ना भएको यो लगातार तेस्रो दिन हो ।